Archive de l'auteur | NewsMada | Page 956
Madagasikara – Comesa : tokony ho vokatra voahodina no haondrana
Par Taratra sur 10/05/2016 Economie, NS Malagasy
Handray ny fivorian’ny Comesa ny eto Madagasikara ny volana oktobra ho avy izao. Vonona ny eto an-toerana handray izany fivoriana iraisam-pirenena izany, araka ny voalazan’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Attalah Beatrice, fa ny minisitry ny Varotra Tazafy Armand no tena mpandrindra izany. Tokony hohararaotin’yreo mpandraharaha eto an-toerana ny fandraisana io fivoriana io, indrindra any amin’ny sehatra […]
Fanampian’i Japana : maivana loatra ny tetikasa aty Afrika
Voalohany handray ny Ticad, fivoriana faha-VI eo amin’i Japana sy Afrika ny aty amin’ny tany afrikanina. Handray izany fivoriana lehibe izany i Kenya amin’ny volana aogositra amin’ity taona ity. Efa nisy ny fivoriana natao tany Djibouti, dingana lehibe ho fanomanana izany. Nandritra izay fihaonana tany Djibouti izay anefa, notsiahivin’ny masoivohon’i Djibouti miasa any Japana ny […]
An-kitsim-po : zo ny mahazo tambiny
Par Taratra sur 10/05/2016 Divers, NS Malagasy
Betsaka ny fanaovan-draharaha amin’ireo sampandraharaham-panjakana isan-tsokajiny tsy maintsy handoavana sarany. Manomboka any amin’ny fokontany izany, kaominina, fananan-tany, fitsarana, fampianarana, sy ny maro hafa. Ara-dalàna raha misy sarany tsy maintsy alain’ireo sampandraharaham-panjakana rehetra ireo. Saingy, tsy fantatra, iza ny mametra ireny sarany ireny sa samy maka izay tiany halaina ireo sampandraharaha ireo ? Hita mantsy fa […]
Antenimiera roa tonta : tsy mazava ny lalàna hodinihina mikasika ny toekarena
Anisan’ny andraikitra voalohan’ny solombavambahoaka ny mandinika sy mandany ny lalàna hitantanana ny firenena. Tsy voafehin’ny ankamaroan’ireo depiote ny pitsopitsony ara-teknika amin’ireny lalàna ireny, hany ka mionona amin’ny fananganan-tanana fotsiny. Ao anatin’ny fivoriambe ara-potoana ny solombavambahoaka sy ny loholona ankehitriny. Maro ny lalàna tokony ho nodinihin’ny Antenimerampirenena tsy vita tamin’ny taon-dasa, raha hisantatra ny azy ny […]
Lapan’i Tsimbazaza : tratry ny tsikera mivaivay sahady ny PGE
Par Taratra sur 10/05/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Dieny aty am-piandohana. Nandray ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana taorian’ny teny amin’ny loholona ireo depiote teny tsimbazaza, omaly. Nahery vaika ny tsikera momba ny fandaharanasa ankapoben’ny governemanta (PGE). Teo koa anefa ireo depiote, zatra mandoka sy mila ranondranony… Tsy atao resabe fotsiny. « Mila fepetra hapetraka mialoha ny fanatanterahana ny fanjakana tsara tantana sy ny tany […]
Matahotra fanonganam-panjakana ny praiminisitra
“Mbola hiverina amin’ny dimy na folo taona lasa tsy nahitantsika fahombiazana ve isika? Fanonganam-panjakana foana ve ny fiainantsika eto Madagasikara? Rehefa misy ny fanonganam-panjakana, misy hatrany ny mpanankarena tampotampoka. Izany ve no tadiavintsika?” Nampiaka-peo ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O., raha nanontanian’ny mpanao gazety, teny Anosy, omaly. Ny vahoaka madinika hatrany no ampiasaina, rovitra pataloa, mandeha […]
Par Taratra sur 10/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Nampiato ny fitokonany ny eo anivon’ny mpandraharaha fonja. Tapaky ny fivoriambe, omaly teny Antanimora, fa hatsahatra ato anatin’ny telo herinandro aloha ny fitokonan’izy ireo noho ny ambara fa tombontsoa ambonin’ny firenena. Niaiky rahateo izy ireo fa efa nivaly na mbola ny ampahany ihany sy tsy nahafa-po aza ny amin’ireo fitakiana natao. Anisan’izany ny fahazoana fiara […]
Antonio Sanchez-Benedito : « Takinay ny tany tan-dalàna sy demokratika… »
Tsy mbola miova amin’ny nambarany. « Mitaky finiavana hentitra ny fivoahana amin’ny fahantrana. Ilàna fandraisana andraikitra sy asa ao anaty fitoniana izany. Eo ny ady amin’ny kolikoly ; ny rafi-pitsarana mahaleo tena, fitoniana ara-toekarena ; ny tany tan-dalàna sy ny fametrahana ny demokrasia… », hoy ny ampahany amin’ny lahatenin’ny solontenan’ny Vondrona eoropeanina, Antonio Sanchez-Benedito tamin’ny fanamarihana ny andron’i Eoropa […]
Fandaharanasa : tsy misy vola hampiasaina
Tsy mbola misy antenaina amin’ny governemanta amin’izay ady amin’ny fahantrana ao anatin’ny telo volana, ny ady amin’ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana… “Amin’izao fotoana izao, mbola tsy tafavoaka tanteraka amin’ny krizy i Madagasikara” , hoy ny praiminisitra tao amin’ny RFI, afakomaly. Tsy ampy be dia be ny loharanom-bola. Misy tetikasa natsangana iarahana tamin’ny Pam sy ny […]
Lalàn’ny fifandraisana : any amin’ny depiote ny baolina
Any amin’ireo depiote ny baolina. Hiaka-dapa eny Tsimbazaza sy Anosoikely rehefa nilona an-taona maro ny volavolan-dalàna momba ny sata sy ny lalàn’ny fifandraisana. Anisan’ny napetraky ny fitondrana ho laharam-pahamehana izany ka nampidirina ho anisan’ny lahadinika amin’izao fivorian’ny parlemantera izao. Na izany aza, samy manana ny fahitany izany ny mpanao gazety. Niainga amin’ny hetahetan’ny mpisehatra, indrindra […]
Nitondra valin-kafatra tamin’ny alalan’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly ny fikambanana Hafari Malagasy manoloana ny fanenjehana mivaivay mahazo azy ireo. Nohamafisin’ny sekretera jeneralin’ny Hafari, Razakasoa Vero fa lainga miharo fanenjehana sy fanaratsiana ny ataon’ny Depiote Naivo Raholdina, izay milaza fa fisolokiana ny ataon’ny Hafari indrindra fa ny tetikasa fifindra-monina, miala ny tanàn-dehibe toy ny […]
Tratran’ny “court-circuit” : nirehitra ny Lycée Moderne Ampefiloha
Par Taratra sur 10/05/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tao anatin’ny iray andro omaly, nandeha ny feo fa nirehitra ny Lycée Moderne Ampefiloha, omaly. Niparitaka hatrany anaty tranonkala ny resaka, ary nampifandraisin’ny olona tamin’ny fitokonan’ny mpampianatra Fram teny Ampefiloha teny. Efitra iray ao amin’ny LMA anefa no nirehitra vokatry ny fipoahana herinaratra. “Valin-drihana no nirehitra vokatry ny fipoahana herinaratra. Niteraka afo sy setroka be […]
Tsy mifankafantatra, miara-manendaka : dimy tamin’ireo jiolahy sivy voasambotry ny polisin’ny UIR
Amin’izao fotoana izao, mpanendaka tsy mifankahalala, miara-miasa manao asa ratsy refa sendra ny rembiny. Tahaka ny teny 67 ha, roa lahy nitambarana sivy lahy nandrobany azy. Aza sendra izany… Avy nanendaka teny 67 ha akaikin’ny Parking, ny sivy lahy ny asabotsy hifoha alahady teo, tokony ho tamin’ny 3 ora maraina ka nifanenjehan’ny UIR (Unité d’intervention […]
Fianarantsoa : tratra ny jiolahy mpangalatra moto
Ela nitoratorahana ka voasambotry ny polisin’ny Fip tarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules ihany ilay jiolahy ikoizan’ny olona ao Fianarantsoa manoloana ny firongatry ny halatra môtô lavareny ao an-toerana amin’ izao fotoana izao. Ny tapaky ny volana avrily lasa teo nanao fisavana môtô rehetra nandritra ny alina ny polisy ary nifanehatra tamin-dRakotonindrina Julien 28 taona, monina ao […]
Par Taratra sur 10/05/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mafampana indray ny toe-draharaha eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Mananontanona indray mantsy ny mety hisian’ny savoritaka ara-politika. Efa nanambara ren-tany ren-danitra mantsy ny mpifanandrina amin’ny fitondrana fa ho avy tsy ho ela, ary haka ny fitondrana. Tsy ho vita mora nefa izany fa tsy maintsy hiaro ny fanjakana sy ny fahefana eo am-pelatanany ny tomponandraikitra […]
Hamaky bantsilana ny kolikoly ireo sendika
« Hararaotinay izao fandalovan’i Ban Ki-moon izao hanehoana amin’izao tontolo izao ny kolikoly ataon’ny mpitondra. Hampahafantarina azy koa fa marary ny vahoaka sy ny firenena noho io kolikoly io… Miantso ny hery velona rehetra : fiarahamonim-pirenena, mpanao politika, vahoaka ; ny fikambanana ; ny mpandraharaha ; ny ray amandreny ara-drazana ; ny sendikà izahay ho etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina rahampitso […]
Voavaly ny ampahany amin’ny fitakiana… : hampitsahatra ny fitokonana ny sendikan’ny mpampianatra
Taorian’ny fitokonana fanairana, nataon’ny mpikambana amin’ny plateforme ivondronan’ny fikambanan’ny mpampianatra sy ny mpanolotsaim-pampianarana, nanambara izy ireo fa hatsahatra ny fitokonana ary hatsangana ny comité Ad’Hoc, hamaha miaraka ny olana. Iarahan’ny solontenan’ny sendikà 13 sy ny sampandraharaha efatra ao amin’ny minisitera ny komity. Tafiditra ao ny talen’ny kabinetra, ny DGEFA, DRH, DEF. Hiaraka hanapaka ny fotoana […]
Tsy fisian’ny orana : mampirongatra ny valala ny toetr’andro
Araka ny tatitra navoakan’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny sakafo (FAO), saika tsy nahitana orana nirotsaka any atsimo sy ny atsimo andrefan’ny Nosy, ny 10 andro farany ny volana avrily teo. Vokany, mihamaina ny ahitra sy ny zava-maitso, ka mety amin’ny fitomboan’ny valala, indrindra ireo mpifindramonina. Nandritra ireo fotoana ireo, nahitana andiam-balala hary elatra vokatry ny […]
Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay mpamily : ankizivavikely maty nofaohan’ny fiara 4×4
Par Taratra sur 10/05/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Maty tsy tra-drano ilay ankizivavikely 11 taona, nofahoan’ny’ny fiara 4×4 iray, teny Ambohimangakely, omaly maraina. Tezitra ny olona ka nikasa hanao fitsaram-bahoaka ireo olona tao anatin’ilay fiara nahavanon-doza… Nihosin-dra indray ny RN 2 mihazo an’i Toamasina noho ity lozam-piarakodia nitranga teny Ambohimangakely ity izay nahafatesana ankizivavikely 11 taona, omaly maraina. Teo akaikin’ny toeram-pivarotan-tsolika Jovenna […]
Par Taratra sur 09/05/2016 En Bref, NS Malagasy
Nanolotra vola mitentina 10 tapitrisa Ar ho an’ny fikambanan’ny mpampivelona eto Madagasikara ny filoham-pirenena mivady ny zoma lasa teo, tany Antsiranana. Entina hananganana toeram-pitsaboana any an-toerana ny fanampiana azo ho fanatsarana ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Nandritra ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny mpampivelona ny nanomezana ny tohana.
Rugby – «Amboaran’ny filoha 2016» : nofaizin’ny FTM Manjakaray ny Tam Anosibe
Par Taratra sur 09/05/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Fantatra avokoa ireo ekipa efatra hiatrika ny manasa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’ny filoha, taranja rugby. Anisan’ireo tafita amin’izany ny ekipa tompondakan’i Madagasikara. Cosfa (Bebaoty), hifandona amin’ny 3FB ary ny STM (Savony) kosa hihaona amin’ny FTM Manjaray. Ireo no fandaharan-dalaon’ny manasa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’ny filoha, taranja rugby. Tontosa, omaly, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka ny […]
Karate : nampivondrona ireo mpikatroka i Me René
Mandalo eto an-tanindrazana, amin’izao fotoana izao, ny Me Ramanitrandrasana René, eo amin’ny taranja karate. Nisy ny fihaonany tamin’ireo mpikatroka niaraka taminy, tao amin’ny Maka na (Malagasy Karate-Do). Mialoha ny niaviany teto Madagasikara nefa, nampivondrona ireo Malagasy mpikatroka eo anivon’ny Maka, mipetraka any Frantsa izay manana ny tepana mainty ihany koa izy ny 16 avrily lasa […]
Kitra Afrikanina : maty tampoka i Patrick
Misaona ny tontolon’ny baolina kitra ao Kameronina. Nodimandry ny zoma lasa teo, tany Romania, i Patrick Ekeng mpilalaon’ny Dynamo de Bucarest, nandritra ny fihaonan’ity ekipany ity tamin’ny Vitorul Constansa. Nianjera ho azy teo ambony kianja mantsy izy, 7 mn taorian’ny nampidiran’ny mpanazatra azy, teo amin’ny minitra faha-69. Ny fiakaran’ny tosi-dra, nahazo azy no voalaza fa […]
Fiainam-pikambanana : hanavao ny biraony ny Fizafato
Par Taratra sur 09/05/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Havaozina ny biraon’ny fikambanantsika amin’ny volana septambra izao ka aoka hanamarina ny maha-mpikambana azy amin’ny alàlan’ny fandoavana saram-pisoratana anarana hahazoana karapanondroana ny rehetra, hoy ny filoha nasionalin’ny Fikambanan’ny zanaka am-pielezan’ny faritany Toliara (Fizafato), Maharante Jean de Dieu, tetsy Mahamasina ny 1 mey teo. Nifampiarahaba tratry ny taona izy ireo tamin’io fotoana io. Na izany aza […]
Hitsy toraka : asio lalàna ê!
Par Taratra sur 09/05/2016 Divers, NS Malagasy
Taona hanaovana fifidianana ho an’ny ankamaroan’ny federasiona, ity taona 2016 ity. Manoloana izany, efa samy manao izay ho afany ireo mpitantana rehetra amin’ny fikarakarana izany. Ny tena mahazendana aloha, miezaka ny hijanona fa tsy mamela ny toerana ho an’ny hafa ny filohan’ny federasiona sasany. Vokatr’izay, mihazakazaka manao izay mety mihitsy ireo filoha ireo, mitady ny […]
« Précédent 1 … 954 955 956 957 958 … 1 067 Suivant »